Shaxda Rasmiga Ah Ee Kulanka Real Betis vs Real Madird – Yaa
Real Madrid oo barbarro ku bilaabatay horyaalka LaLiga usbuucii hore oo ay Real Sociedad goolal la’aan ku kala baxeen ayaa ku sugan magaalada Seville oo ay kula ciyaarayso Real Betis, waxaanay raadinaysaa guushii ugu horreysay ee xili ciyaareedkan.
Ciyaaryahanadda Arsenal Oo Si Carro & Qeylo Leh Iskula Hadlay Ka
Los Blancos oo koobka difaacanaysa ayaa waxa uu Zinedine Zidane sameeyey isbeddel badan marka loo eego ciyaartii hore, waxaana si aan looga baranin uu safkiisa ugu soo bilaabay weeraryahanka ku dhibaataysan Los Blancos ee Luka Jovic oo ka garab ciyaaraya Karim Benzema.
Da’yarka khadka dhexe ee kasoo laabtay amaahda ee Martin Odegaard ayaa kulankii labaad oo xidhiidh ah ugu soo bilowday Real Madrid, waxaana kaydka la dhigay labada ciyaartoy ee reer Brazil ee Vinicius Junior iyo Rodrygo Goez.
Ruug-caddaaga khadka dhexe ee Luka Modric ayaa isaguna kaydka ku jira ciyaartan, waxaase booskiisa dib u helay Casemiro oo ay dhexda wadaagayaan Toni Kroos iyo Fede Valverde.
Difaada ayaanay waxba iska beddelin oo ay iska garab ciyaarayaan Sergio Ramos, Varane, Carvajal iyo Mendy.
axadle 3027 posts
Chelsea Oo Barbarro Dirqi Ah La Gashay West Brom, Silva Oo
Wolves Oo Tiktok Soo Dhigtay Muuqaal Ay Ku…